सनराइज बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सबिचको सम्झौता - InHeadline
सनराइज बैंक र शिखर इन्स्योरेन्सबिचको सम्झौता
By RSS on Mar 14,2018 - 17:39
सनराइज बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बीच बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा सन्राइज बैंक लि. का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रत्नराज बज्राचार्य तथा शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री दिप प्रकाश पाण्डेले हस्ताक्षर गर्नु भयो ।
उक्त सम्झौता अन्तर्गत बैंकका बचतकर्ताहरुले अस्पताल भर्ना भई स्वास्थ्य उपचार गराउँदा लाग्ने खर्च, बढीमा रु. १ लाख वा बचत खातामा रहने बार्षिक औषत मौज्दातको २५५ भन्दा नबढ्ने गरी दाबी गर्न पाइनेछ । सन्राइज बैंक लिमिटेडले आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको लागि “सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्र्तगत दुर्घटनामा परि कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी तवरले व्यक्ति अशक्त भएमा रु. ५ लाख नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म दाबी गर्न सकिनेछ । अब यस सम्झौता पश्चात सन्राइज बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले खाता खोलेको पहिलो दिनबाटै स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधाको उपयोग गर्न पाउनेछन् । यो सम्झौता सँगै सन्राइज बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुले दुर्घटना साथै स्वास्थ्य दुबै बीमा सुविधाहरु पाउने भएका छन् ।
ट्याग - सनराइज बैंक लिमिटेड र शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. बीच बैंकका बचत खाताका ग्राहकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार बीमा सुविधा प्रदान गर्न सम्झौता